Poly Bridge 2: zvitsva zvemukati zviripo kubva mumutambo wevhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Pa Android iwe waona zvechokwadi anopfuura imwechete Google Play Chitoro vhidhiyo mutambo werudzi urwu. Ndokunge, mitambo mune yako basa ndeyekuvaka isingagumi mabhiriji kuyambuka traffic uye batanidza mapoinzi maviri nenzira inoshanda kwazvo. Ndicho chinangwa chezita iri rinonzi Poly bhiriji 2, iyo iripowo inowanikwa yeLinux uye ikozvino ine zvimwe zvemahara zvemukati zviripo kwauri.
Un dambanemazwi mutambo yakagadzirwa muna 2016 uye iine akawanda uye muropa nhanho, maitiro matsva achienzaniswa neyakatangira, injini yemuviri yakasarudzika, mishandirapamwe mitsva, nezvimwe zvakawanda. Pasina kupokana, zvemukati zvinokuita kuti upedze maawa uchitsauswa pamberi pechiso uine zvakawanda zvirimo kupfuura nakare kose nekuda kwekuvandudzwa kwakatangwa muna Nyamavhuvhu 2 uye iyo yemahara zvachose (iwe unobhadhara chete mutambo wepasi).
Wakawedzera a World 5, ine nzvimbo yeSerenity Valley iyo inosvika kusvika pamatanho gumi nematanhatu nematambudziko anonakidza, pamwe nezvitsva zvitsva zvaunofanira kuwana. Uye kana izvo zvisina kukwana, iyo Sandbox Mode yakawedzerwawo nemitambo mitsva, mhando dzemotokari, kugona kudzokorora zvinhu zvakawanda zvakasarudzwa, kusarudzwa chaiko kwezvikepe uye ndege, kugona kugadzirisa shanduko dzakawanda, uye zvimwe shanduko.
Kana iwe uchifarira kutanga izvozvi kuti ugadzire akasiyana-siyana uye anoshanda mabhiriji, saka usazeze kuita dhawunirodha zvese izvi zvirimo izvozvi de chitoro chako cheStam. Sezvauri kuona, ikozvino, Poly Bridge 2 inogona kuve yako ye € 12.49 yeLinux. Sezvauri kuona, kune zvakare Patch 1.09 uye Poly Bridge 2 Nyowani Chitoro muchitoro kurodha mahara neaya ese nhau andataura.
Saka kana uchinge wave nemutambo wepasi, unogona kuisa iwo zvinyorwa kana kukwidziridzwa kuti uwane zvimwe. Uye kana iwe uchida kutanga kubva pakutanga, zvakare ine Poly bhiriji 1 inowanikwa muchitoro chako cheValve. Ino nguva inodhura € 8.19.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Poly Bridge 2: Nyowani Yemahara Yemukati Inowanikwa
FBI inoyambira nezve Windows 7 uye njodzi dzekuchengetedza